merolagani - गुराँस लाइफको खुद बीमाशुल्क २९ प्रतिशतले बढ्यो, खुद नाफा कति ?
गुराँस लाइफको खुद बीमाशुल्क २९ प्रतिशतले बढ्यो, खुद नाफा कति ?
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (GLICL) ले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा खुद बीमाशुल्क आर्जन रकम गत आवको पुस मसान्तको तुलनामा २९.३७ प्रतिशतले बढाएको छ।
कम्पनीले चालू आवको ६ महिना अवधिमा कम्पनीले ७१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। गत आवको पुसमा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन ५५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
यस अवधिमा इन्स्योरेन्सले ४ करोड ९ लाख ९५ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको छ। गत वर्ष पुसमा ३ करोड ८२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको कम्पनीको खुद नाफा गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ७.१४ प्रतिशत बढी हो ।
धितोपत्र बोर्डबाट चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत हकप्रद बिक्री गर्न अनुमति पाएको गुराँस लाइफले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीको ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको छ । गत पुसमा वार्षिक १२ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको कम्पनी प्रतिशेयर आम्दानी १३ रुपैयाँ ८० पैसामा बढेको छ ।
यस कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार ३ अर्ब ५६ करोड ३ लाखबाट ३६.९० प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । कम्पनीको महाविपत्ति जगेडा कोषमा ३ करोड २३ लाख र जगेडा कोषमा २६ करोड ५२ लाख सञ्चित छ । यस अवधिमा कम्पनीको महाविपत्ती कोष २१.५६ र जगेडा कोष २४.२० प्रतिशतले बढेको हो ।
जारी बीमालेखको संख्या एक लाख ९२ हजारबाट दुई लाख पुर्याएको यस कम्पनीले यसे त्रैमाससम्म कूल ६ अर्ब ६१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ९५ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्र आर्जन गरेको थियो ।
कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १५० रुपैयाँ १० पैसा र मूल्य आम्दानी अनुपात ५१.४४ गुणा बढी छ ।
तथ्याङ्कमा नयाँ जीवन बीमा कम्पनी: खुद बीमाशुल्कमा युनियनले लिड गर्दा खुद नाफामा रिलायवलको अग्रता
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स व्यवसाय वृद्धिमा सफलता हासिल गर्दै, खुद बीमा शुल्क करिब ३१ करोड
राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ३ अर्ब बढी बीमा कोषमा सार्दा खुद नाफा घट्यो
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको खुद बीमा शुल्क अर्ब नजिक, खुद नाफा कति ?
एशियन लाइफको जीबन बीमाकोष १५ अर्बको बन्यो, पौने दुई अर्ब खुद बीमा शुल्क आर्जन
नेपाल लाइफको खुद बीमा शुल्क करिब साढे दश अर्ब, नाफामा सुधार